Zụta Mmasị ụda SoundCloud - SoNuker
Uru ndị dị a Iaa ka m ga-ahụ ma ọ bụrụ na m zụta ụda SoundCloud?
Na-agba ndị ọzọ ume ka & & ntinye na posts gị
Dịkwuo ọkwa gị na Hashtags ị jibu
Ọ na - enyere gị aka ibute mmetụta nke “nje”
Ndị ọzọ yikarịrị ka -achọ, lelee & kwuo na posts gị
A na-enyefe iwu ngwa ngwa n'ime awa 24
SoNuker ga-anapụta gị mgbe ọ bụla ị zụrụ
Kedu ihe kpatara m ga-eji zụta ụda SoundCloud?
Ọ masịrị bụ ihe kachasị mkpa onye na - eso ma ọ bụ onye na - eso ya ga - elele mgbe ha na - elele profaịlụ gị. Ọ dị ezigbo mkpa na ndị Mmasị gị kwekọrọ na onye na-eso ụzọ gị iji chebe ntụkwasị obi n'etiti ndị na-ege gị ntị.
Ọ bụrụ na ihe ndekọ ego nwere ndị na-eso 20,000 na naanị 20 Likes, ọ ga - eme ka ndị na - ege gị ntị jikọta izi ezi na itinye aka nke ụmụazụ gị. Mgbe ịzụrụ amasị, ịnwere ike ịbawanye otu mmasị na ndị na-eso ụzọ na profaịlụ gị. E gosiputara nke a iji mee ka ndị na-ege gị ntị tinyekwuo ndu.
Kedu mgbe a ga-anapụta ụda My SoundCloud?
Iji hụ na ebumnuche kacha mma na nnyefe, anyị na-enyocha ọrịre ọ bụla. Ya mere, ọ ga-ewe awa 24 ka iwu gị wee bido. 99% nke oge iwu gị ga-amalite n'ime awa ole na ole ma ọ bụ erughị. Ọ bụrụ n’inyere iwu ka ukwuu, ọ ga-aga n’ihu ụbọchị ọ bụla ruo mgbe arụzuru ọrụ ahụ.
Nke a na-etinye Akaụntụ m n'ihe egwu?
Service Ndị Ndenye 50 YouTube ($ 20) Ndị Ndenye 100 YouTube ($ 30) Ndị Ndenye 300 YouTube ($ 45) Ndị Ndenye 500 YouTube ($ 60)
Agbakwunyela SoundCloud na ụgbọ ibu gị.
100 Reposts ($ 15) 200 Reposts ($ 30) 500 Reposts ($ 45) 1000 Reposts ($ 80) 2000 Reposts ($ 160) 5000 Reposts ($ 300) 10000 Reposts ($ 700) 20000 Reposts ($ 1200) 40000 Reposts ($ 2200)
Inweta ndị na-ege ntị Twitch ka ha denye aha na ọwa YouTube gị: ndụmọdụ na aghụghọ
Otu esi emeso ndị debanyere aha siri ike na akaụntụ YouTube azụmahịa gị
Ntuziaka ịre ahịa YouTube dị nkenke
Otu esi enweta ọtụtụ n'ime njirimara VR YouTube iji nweta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ